SJSZ65 PVC siringi Panel extrusion muchina - China Qingdao Suke Machinery
kambani yedu pamwe mumayunivhesiti zhinji kukudziridza kudiwa epurasitiki muchina. Zvinoitawo absorbs michina yemhando yepamusoro kubva kunze kwenyika vabudirire chinangwa achipa muchina kwakakwana uye rwokugadzira.
The PVC siringi yakaitwa kubudikidza PVC uye zvimwe yokuvirisa. Zvinonzi kunyanya kushandiswa mukicheni uye washroom kushongedzwa. Rine zvechadenga chiedza uremu, unyoro-uchapupu, kupisa kuputira uye hazvisi nyore kuti moto, tibatsirwe guruva, asi nyore kunyora, kuisa.
4. kuumba Machine
5. dhonza-kure Machine
Ebetsero Machine nokuti Option
2. 200/500 chisanganiso
It akaedzwa kuti nguva zhinji, saka ine zvakanakira rokuponesa simba uye zvinhu, uye kuwedzera kushanda zvakanaka uye mubereko nokugamuchira michina yemhando yepamusoro. The inogadzirwa PVC sirin'i muchina risina mvere, akanaka, uye pasina kukuvadza kwakanaka, kunze hazvisi nyore kuti kubva chimiro.
Kune mhando dzakawanda PVC remba, dzakadai assortments pakati samafuta chena, ruomba ruvara, iine acid zvitema, uye mifananidzo ruva, parquet, yemishenjere pichisi. Uye Zvechokwadi, mifananidzo uye mavara ari PVC sirin'i anoitwa maererano vatengi 'zvinodiwa.
PVC siringi, PVC Panel, PVC rusvingo Panel
Chiedza uremu uye nyore kugadzwa
5.8m / 5.95m / sezvo makasitoma 'zvinodiwa
Printing, hot-tsikwa, pearlite yokudhinda, peritoneal, zvakajairika vaima, yakakwirira vaima
Zvakasiyana-siyana Mavara kwamuri kusarudza
(1) High vanodzokera pamusoro, kumeso pasina gwanza kana concatenated
(2) Fireproof, unyoro-uchapupu, chakuvhuvhu-uchapupu, isapinda, soundproof, ruzha-Inofadza, chiedza yairema uye nyore kugadzwa
(3) Kuti sirin'i uye rusvingo kushongedzwa
(4) The siyana mavara uye mapatani
Flat pamusoro kana pakati buri
Previous: SJSZ51 PVC siringi Panel extrusion Machine
Next: SJSZ80 PVC siringi Panel extrusion Machine
SJSZ65 PVC yokushongedzwa rusvingo bhodhi extrusion Machine
SJSZ55 PVC yokushongedzwa rusvingo bhodhi extrusion Machine
SJSZ80 PVC siringi Panel extrusion Machine
SJSZ51 PVC siringi Panel extrusion Machine